Gods Music Festival ကို သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့တွင် ကျင်းပမည် - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၁၃- နိုင်ငံခြား DJ ပညာရှင်နှစ်ဦးအပါအဝင် DJ ပညာ ရှင်ရှစ်ဦး၏ဖျော်ဖြေမှုကို ငွေကျပ် ၁၅ဝဝဝ ဖြင့်ခံစားနိုင်မည့် Gods Music Festival ကို သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့တွင် ကျင်းပ မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ Gods Music Festival ကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ Yangon Water Boom (သာကေတ)တွင် အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက် (သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့)၌ Milky Way Entertainment မှ ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ နာမည်ကြီး DJ ပညာရှင်များဖြစ်သော Narvis, Lion Grunenberg နှစ်ဦးနှင့် ပြည်တွင်းနာမည် ကြီး DJ ပညာရှင်များဖြစ်သော Double U ? The Kendrick ? Ajohn ? Biggy Wyne ? Kandi K ? Neonz ခြောက်ဦး စုစုပေါင်း DJ ပညာရှင် ရှစ်ဦးမှ ပါဝင်ဖျော် ဖြေမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Milky Way Entertainment မှ Director ဆုကဗျာက ”လူတန်းစားမရွေး လာနိုင်အောင် လက်မှတ်ဈေးကို စီစဉ် ထားပါတယ်။ တကယ့်တကယ်ဆို EDM က နိုင်ငံတကာမှာ ပွဲတစ်ပွဲကိုသွားဖို့က လက်မှတ်ကို ရာချီပေးဝယ်ရတယ်။ တချို့ VIP လက်မှတ်ဆို ဒေါ်လာထောင်ဂဏန်း အထိပေးပြီးဝယ်ရတဲ့ Music Festival တွေလည်းရှိတယ်။ အစ်မတို့ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ စီးပွားရေးအရကော၊ ကျောင်းသားလေး တွေ သူတို့မုန့်ဖိုးနဲ့ လာလို့ရအောင် လက် မှတ်ဈေးကို ငွေကျပ်တစ်သောင်းခွဲသတ် မှတ်ထားပါတယ်။ အေးအေးဆေးဆေး သီးသန့်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ သူတွေအ တွက် VIP လက်မှတ်ကို ငွေကျပ်သုံး သောင်းခွဲနဲ့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်”ဟု အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်က ကျင်းပပြုလုပ် သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောသည်။
အဆိုပါလက်မှတ်များကိုBrave Bar, Pirate(Inyalake), World Wide KTV, Sport Bar (Inyalake), M2M Dvd Shop, MIC, Real Fitness, Tony Tun Tun, Victoria College, Yangon Water Boom, Vape City II (Dagon Center), Vape City III (Hledan Center), ရွှေချည်လွှာပိုးထည် တိုက်အပါအဝင် နေရာ ၁၅ နေရာတွင် ရောင်းချပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Milky Way Group of Companies, General Manager ကိုအောင်မော် သန့်က ”သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့မှာ ခရီး မထွက်တဲ့ ဘော်ဒါတွေ၊ လူငယ်တွေ၊ လူကြီး တွေစသည်ဖြင့် အသက်အရွယ်အပိုင်း အခြားမရွေး entertainment တစ်ခုအ နေနဲ့ လူငယ်တွေပျော်ရွှင်စွာ ကခုန်နေကြ မယ့်ပွဲတော်လေးတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးလို တဲ့ စေတနာအရင်းခံလျက်ရှိပါတယ်။ ဒါ့ အပြင် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Yangon Water Boom ကိုလည်း လူငယ် တွေနဲ့ပိုရင်းနှီးစေချင်တယ်။Milky Way Entertainment အနေနဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ music industry ကိုလည်း ပိုမိုတိုးတက် စေဖို့ တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ကူညီ ပေးချင်ပါတယ်။ နောက်နောင် ရန်ကုန် တင်မက တခြားနယ်မြို့လေးတွေမှာ Gods Music Festival ကို မြန်မာ့ရိုးရာပွဲ တော်ကာလတွေမှာ ဆက်လက်ကျင်းပဖို့ အတွက်ရှိပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
သီချင်းဆိုခြင်းလုံးဝမရှိဘဲ သံစဉ် သက်သက်ဖြင့်သာဖျော်ဖြေသည့် EDM ပွဲများသည် လူငယ်များအကြား စိတ်ဝင် စားမှုပိုမိုရရှိလာပြီး တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုမို၍ EDM ပွဲများကိုလည်း နိုင်ငံတ ကာမှ DJ ပညာရှင်များနှင့် ပြည်တွင်း DJ ပညာရှင်များတွဲဖက်၍ ကျင်းပလာ ကြောင်း သိရသည်။
ပါဝင်ဖျော်ဖြေပေးမည့် DJ ပညာ ရှင် Double U က ”စက်တင်ဘာမှာ တစ်လလုံး နားကိုက်လို့ နားထားတော့ သီချင်းတွေအများကြီး စုထားတယ်။ အခု ပြန်ပြီးပွဲထုတ်မယ့်ပွဲလည်းဖြစ်တယ်၊ ပွဲကြီး လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ သီချင်းတွေက ထူးထူးခြားခြားဖြစ်အောင် လုပ်ထားတာ ပေါ့နော်။ EDM ပွဲတွေအပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စားမှုက ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် DJ သင်တန်းဖွင့်ထားတာဆိုတော့ စိတ် ဝင်စားမှုရှိလာတာကို သိရပါတယ်။ သင် တန်းမှာ ကလေး DJ တွေတောင် လာ တက်တာရှိနေပါပြီ။ ကလေးတွေကအစ DJ music ဘက်ကို စိတ်ဝင်စားလာ ကြတယ်။ EDM music က ပိုကျယ်ပြန့် လာတဲ့အတွက် လာမယ့်နှစ်တွေမှာ DJ တွေ ပိုများပြားလာမှာပါ”ဟုပြောသည်။
အာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံတမန်က တာလီဘန်အရာရှိများနှင့် ကာတာတွင်တွေ့ဆုံ